Umfazi wesimanje kufuneka akwazi ukuhamba kwihlabathi lanamhlanje, ezoqoqosho, ezopolitiko, ishishini kwaye, ngokuqinisekileyo, ngefashoni. Ziziphi iimpawu zendlela yohlobo lwamahlobo ebusika 2009-ntwasahlobo ka-2010 zama ukuyiqonda.
Ngalesi sihlandlo, ii jeans ezincinci aziyi kulahleka ukufaneleka kwazo. Ezi zibhulu ziza kuba njengesiseko sokudala imifanekiso ekhethekileyo yamakhosikazi. Kufuneka kuphela ukhetho oluphezulu. Ingaba yintambo, i-pullover enamaqhina kunye ne-blunt airy, kunye ne-short top, kunye ne-tunic ende. Iimodeli zendalo yonke zifanelekileyo. Umzekelo, ukuba unxibe i-blouse kunye nombala wegolide ovulekileyo ovulekile ngokubambisana nejacket okanye ijacket, uya kufumana i-ofisi ekhangayo ye-ofisi. Kwaye ukuba uthetha nje ijeyethi yakho kunye nejacket, umqeshwa weofisi uza kuba yinkwenkwezi yeqela.
Ngefestile kukho i mini. Ingaba iingubo okanye iifutshane. Ukuphumelela ngentsebenziswano ye-mini kunye ne-blouse, eyazaliswa yesikhafu sokuhlobisa nge-fringe ende. Iimfesi kunye neengubo zokunqumla kwamahhala-ukuhamba kwebusika ngo-2009-ntwasahlobo ka-2010. Yongeza le ngubo ngeebhokhwe zeenyawo ngezithende zetsimbi kunye ne-podvorotami. Gqoka kwiintsimbi eziqinileyo - kwaye awusabi ukwanda kwamaqabunga ebusika okanye i-spring slush. Ukuba ukhetha iidrafti, hlela utshintshe iigoshe ngaphakathi kwezihlangu.
Intshukumo yefashoni yeli xesha i-jacket-scarf. Le nto ifanelwe imbonakalo yakho kwiidrobhe. Isambatho-ibhatyi-ibhentshi ibonakala imangalisayo kwaye ingalindelekanga. Ngaphambi kokuba kuthatyathwe i-blouse enhle kakhulu. Kodwa imbonakalo yangemuva ibangela ukumangaliswa. Ijekethi iyajika ibe yinqabunga ebanzi evulekileyo ivula amahlombe.
Ubuhle obubulalayo buyakwazi ukuzithobela kunye nabanye ngokuxuba imizobo. Gqoba i jeans, phezulu kunye ne-tank top. Yaye ukuba uncedisa le ngubo ngentsimbi ekhuselayo, ukuqala kwengubo yakho kuya kumangalisa wonke umntu. Ukubambisana ngokubambisana ne-audacity kunika umxube wokuqhuma.
Ngona isicu esilula sinokuguqulwa sibe yinto engayibalekiyo. Kufuneka kuphela ukusebenzisa ukushicilelwa kwangaphambili. Umzekelo, wonk 'ubani uya kukhunjulwa ingubo yomhlophe emhlophe kunye nesaphetha esimnyama esifubeni sakhe. Ukwahlukileyo komhlophe kunye nomnyama kuyinketho yokuphumelela kwixesha lonke.
Iimpawu zohlobo lwebusika ngo-2009-ntwasahlobo 2010 alushiyi i-breches ekhwele. Kwaye le xesha aliyi kuyenza ngaphandle kwezi ngqungquthela. Ziyakwazi ukugqithwa ngeentonga zombini kunye neebhatyi zoshishino. Omnye umzekelo wokudibanisa ngokuphumelelayo kwezitayela ezahlukeneyo.
Kwaye abaqulunqi befestile banqwenela ukunceda abasetyhini banqobelele ingxaki kunye nokulahlekelwa okungenani. Akukho zitshintsho ezikhawulezileyo kwimizila yefestile yexesha. Zininzi izinto ezinokuhamba ukusuka kwonyaka ukuya kwixesha, ngelixa zihleli ekuphakameni kwefashoni. Kufuneka kuphela ukuvelisa izantyazana ngoncedo lwezixhobo ezintsha ezikhanyayo.
Ngoko ngexesha elizayo, iintandokazi zombala zavela. Uluphuzi, i-turquoise kunye nebomvu. Yongeza ingubo ngekhanda elibomvu okanye i-brooch enkulu ephuzi, kwaye uya kukhangeka kwaye udume njenge-fashionista. Imibala yaseKlastiki emnyama neyemhlophe, i-brown kunye ne-pastel tones zihlala zifanayo.
Isisele esele sihlala, ingakumbi iScotland, iJometri yeepateni kunye nokupakisha kwemizila kuthatha ingqalelo. Iidayimane zivelisa izikhundla zabo, kodwa abayikushiya.
Iimpawu zohlobo lwebusika ngo-2009-ntwasahlobo 2010 zikholisa abafazi ngeentlobo zabo. Ukufumaneka, ukukhanya, ukuhlukahluka. Umfanekiso unokuncediswa kunye nenani elikhulu lezinto eziphathekayo: iibhegi phezu kwegxalaba, iiflethi zobubanzi obubanzi kunye nobude, imibala yeenwele zee-shades ezahlukeneyo. Ngendlela yokuphinda iphinda ibe yimibala emininzi kwimifanekiso edalwe.
Iindlela eziphambili zexesha elizayo ziyaqhubeka nomsebenzi wexesha elidlulileyo. Akukho zinguqu zokuqala. Unokugqoka izinto ezifanayo, nje ukuzongeza ngezinto ezintsha, ezithandayo. Yenza imifanekiso emitsha ngokudibanisa izinto ezindala.
Wonke amabhinqa angabheka imfashini kunye nesicatshulwa. Emva koko, inkululeko ekuchazeni "mna" yindlela ebonakalayo yonyaka. Zama, zama kwaye uzithokoze wena kunye nabanye ngobuhle bakho kunye nomoya omangalisayo.
Iindlela eziphambili kwindlela yokubusika
Isimo sezulu e-Anapa ngoSeptemba 2016 sichazwe yiziko le-Hydrometeorological Centre. Uhlobo lwe-Anapa lokushisa kwamanzi kunye nomoya ngo-Septemba
Inkomo nge nectarines
UDorada kwi-marinade ye-ginger-mint
Ukutya nge-tsholeta kunye ne-bananas
Lasagna nge zucchini kunye nebhekoni